सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेड | गृहपृष्ठ
Home लगानी सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेड
सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेड
कम्पनीको नाम : सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैङ्क लि.
वर्गीकरण : विकास बैङ्क
मुख्य कार्यालय : तीनकुने, काठमाडौं, नेपाल
स्थापना : २०५७ आसार ११
अध्यक्ष : शेखर अर्याल
सीइओ : दीपेन्द्र कार्की
शाखा कर्यालयहरू : १८
संस्थापक शेयर : ६० प्रतिशत
सर्वसाधारण शेयर : ४० प्रतिशत
वित्तीय क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त विज्ञहरूको संलग्नतामा स्थापना भई क्षेत्रीयस्तरमा कारोबार गर्दै आएको यो बैङ्कले चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी २०६६ माघदेखि राष्ट्रियस्तरको विकास बैङ्कका रूपमा सञ्चालन हँुदै आएको छ । चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न बैङ्कले २०६५ चैत २६ देखि १ः५ को अनुपातमा ५३ लाख ७८ हजार ६ सय २५ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गरेको थियो । स्थापनाकालमा बैङ्कले लुम्बिनी, नारायणगढ, नवलपरासी, भैरहवा, रूपन्देही, टाँडी र खैरेनी तथा देशका अन्य स्थानमा शाखा विस्तार गरी कारोबार गर्दै आएको थियो । हाल बैङ्कले देशका विभिन्न जिल्लामा १८ ओटा शाखामार्फत कारोबार गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. ६४ करोड ५० लाख रहेको छ । गत आवमा बैङ्कले ६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । चालू आवमा ८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव आगामी साधारणसभामा लैजाने भएको छ ।
१ सय ८० दिने शेयरमूल्यको ट्रेण्डलाई आरएसआई चार्टद्वारा विश्लेषण गर्दा आरएसआई रेखा स्केल २५ अर्थात् ओभरसोल्ड जोनमा देखिएको छ । हालसम्मको कारोबारलाई हेर्दा आरएसआई रेखा स्केल १२ को न्यून बिन्दुमा देखिएको र स्केल ७१ को सबैभन्दा उच्चबिन्दुमा पुगेको छ । औसतमा कम कारोबार हुने तथा शेयरमूल्यमा निरन्तर उतारचढाव देखिएकाले आरएसआई रेखा अस्थिर देखिएको हो । अहिले बैङ्कको शेयरमूल्य न्यून रहेको र चालू आवमा ८ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरिएकाले शेयरमूल्यमा सामान्य सपोर्ट पाउने सम्भावना बढेको छ । यो बैङ्कको शेयर खरीद गर्न चाहने लगानीकर्ताका लागि अहिले उपयुक्त समय हो । तर, विक्रेताले केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
चालू आवको पहिलो त्रैमासमा बैङ्कको नोक्सान रू. २ करोड १६ लाख देखिएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यो ६ सय ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत कम हो । विगत लामो समयदेखि मुनाफामा सञ्चालन हुँदै आएको यो बैङ्क यस चालू आवको प्रथम त्रैमासमा नोक्सानमा देखिएको हो । चालू आवमा बैङ्कले आफ्नो जगेडा कोष रू. ७ करोड १३ लाख पु¥याएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यो १ सय २८ दशमलव ९५ प्रतिशत बढी हो । १ वर्षको अवधिमा मुनाफादरमा कमी आए पनि जगेडा कोषमा उल्लेख्य सुधार भएको छ ।
गत आवको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा बैङ्कको निक्षेप १६ दशमलव ३८ प्रतिशत बढेर रू. ४ अर्ब १४ करोड पुगेको छ । यो अवधिमा बैङ्कको लगानी २४ दशमलव ३९ प्रतिशत घटेर रू. २४ करोडमा झरेको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा बैङ्कको कर्जा प्रवाह रू. ३ अर्ब ३८ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यो ५ दशमलव ८७ प्रतिशतले धेरै हो ।
वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बैङ्कको वित्तीय अवस्थामा केही सुधार देखिए पनि चालू आवको पहिलो त्रैमासमा बैङ्कका अधिकांश परिसूचक नकारात्मक अवस्थामा रहेका छन् । यो अवधिमा बैङ्कको निष्क्रिय कर्जा अनुपात वृद्धि भएको छ । हाल बैङ्कको प्रतिशेयर आय रू. ३ सय ३५, मूल्य आम्दानी अनुपात २९ दशमलव ८५ गुणा नकारात्मक अवस्थामा रहेको छ भने किताबी मूल्य रू. १ सय ११ दशमलव शून्य ६ रहेको छ ।
हाल यो बैङ्कको बजार शेयरमूल्य अङ्कित मूल्यभन्दा तल झरेको छ । सन् २००८ अगष्ट ८ मा रू. १ हजार ९ सम्ममा कारोबार भएको शेयर हाल रू. ८७ मा झरेको छ । यो ९५ दशमलव ४२ प्रतिशतले कम हो ।
मुलुकका विकास बैङ्कहरूको समूहमा आव २०६७÷०६८ को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार निक्षेप सङ्कलनतर्फ यो बैङ्क चौथो स्थान र बजार पूँजीकरणका आधारमा १६आंै स्थानमा रहेको थियो । गत बुधवारको कारोबारअनुसार बैङ्कको शेयरमूल्य रू. १ घटेर २ हजार ३ सय ५५ कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
(ज्याम् टेक्नोलोजिज प्रालि)